Ìhè expandgwè kọwakwuru azịza ohuru maka imekọ ihe ọnụ | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Mgbasa Injinia Mgbasa Ozi
Home » Apụta » Ìhè Iron na-agbasawanye ihe ngwọta dị iche iche maka imekọ ihe ọnụ
Ìhè Iron na-agbasawanye ihe ngwọta dị iche iche maka imekọ ihe ọnụ
Onye na - eweta ọrụ na - emepụta ihe na - aga n’ihu na - enyere ike okike aka n’enweghi nkwenye, na - ekwuwapụta ọrụ niile dịpụrụ adịpụ, mgbanwe dịpụrụ adịpụ yana mgbakwunye mgbakwunye ndị isi na ndị otu.
Kemgbe ọ malitere na 2009, Light Iron, ụlọ ọrụ Panavision, etinyela aka na ịtụgharịghachi usoro nrụpụta post. Nraranye ahụ maka ihe ọhụrụ emeela ka ụlọ ọrụ ahụ kwadebere iche iche iji merie ihe ịma aka nke oge a, bụ nke a na-amanye ụlọ ọrụ mmegharị ihe nkiri niile ịtụle etu o si arụ ọrụ, site na ntinye site na post. Dika mmeputa na-acho uzo ha g’eme ka oru ha ghara iru, Light Iron azara ya otutu ihe ohuru maka uda, ihe ndi ozo na offline, DI na mmecha nke na agbasa ndi ahia ihe okike ebe obula ha n’aru oru, dika onyinye nke ulo oru. amaliteghachiri.
N'ịkwado nkwado Light Iron maka atụmatụ ọhụrụ ndị a, ụlọ ọrụ ahụ anabatala ndị isi atọ ama ama na ndị isi otu ndị isi ya. Seth Hallen, Phil Harrelson, na Laura Borowsky ga-enyere aka ịbawanye akụrụngwa nke ụlọ ọrụ ahụ, gbasaa onyinye ọrụ ya, ma kwado ụlọ ọrụ ụlọ ma na-aga n'ihu na-azụlite mmekọrịta, mmegharị, na nimble ikuku nke Light Iron maara nke ọma.
Peter Cioni - Onye isi Nchịkwa
Mgbe nrụpụta kwụsịrị na mbido afọ a n'ihu mkpọchi ụwa niile iji gbochie mgbasa nke COVID-19, ọrụ dị ugbu a na post ga-emegharị maka iji ụgbọ mmiri iji rụọ ọrụ ha. "Site na mbido, ọ bụ ozi anyị na Light Iron iji duzie ndị ahịa anyị site na teknụzụ na-agbanwe agbanwe mgbe niile na teknụzụ na arụmọrụ ka ha nwee ike ilekwasị anya n'ịkọ akụkọ ha na-enweghị nkwekọrịta," ka Peter Cioni, onye isi ngalaba na-ahụ maka Light Iron kwuru. “Ebe ọ bụ na anyị amatala ngwa ọrụ ekwentị yana imekọ ihe ọnụ, anyị nwere ike ịgbanwe ndị na-ese ihe anyị na ndị ahịa anyị n'ụzọ na-enweghị isi, na-eweta ahụmịhe anyị na-arụ n'ụlọ ruo n'ụlọ ha na-efu efu - ma ọ bụ oge imechi.
Light Iron bụ onye ọsụ ụzọ oge gboo na-arụ ọrụ na-agagharị agagharị, ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-agbanwe agbanwe na Outpost Remote Control (RC), ọgbọ kachasị ọhụrụ nke Outpost dị nso na dailies solution, nke na-enye onye na-acha ọkụ ọkụ Light Iron aka ịchịkwa usoro zuru ezu remotely, n'agbanyeghị ala ala anya. Enwere ike itinye ngwa ngwa Outpost RC ngwa ngwa na ụlọ ọrụ na-emepụta ihe, ebe data, ma ọ bụ ebe ọ bụla dị mma maka nrụpụta ahụ, na-enye uru niile nke ezigbo oge dị nso na nso nso a na-achọghị ka onye na-agba agba na-ahụ ya na setịpụrụ. Nke a na-enye ohere ka nrụpụta a mee ka ọnụọgụ ndị ọrụ ha dị na saịtị - nke ka bụrụ ihe kacha mkpa n'oge COVID-19 - ma n'otu oge na-enye ndị cinematographers mgbanwe iji rụkọta ọrụ na akwụkwọ akụkọ ọ bụla na akwụkwọ akụkọ Light Iron, n'agbanyeghị ebe onye na-agba agba ahụ nọ.
Light Iron agbatịwokwa ihe ngwọta mgbazinye na-anọghị n'ịntanetị iji weta ahụmịhe mbụ nke ọnọdụ onyinye ya na-enye na ndị ahịa ozugbo, na-akwadebe ha nrụnye ụlọ zuru oke nke ejikọtara na Light Iron bụ isi akụrụngwa. Light Iron na-acha ọcha-glove nnyefe na-enye ihe niile onye ahịa ga-achọ, site na ngwá ụlọ na ngwaike - gụnyere ihe SDI nyochaa obi ike - nkwado zuru oke, nkwado nzọụkwụ iji nweta usoro ahụ ma na-arụ ọrụ. Ozugbo melite, ahịa usoro ejikọta na-agụ site na nchebe uchu Ihe nkesa Nexis nke etinyere na Light Iron, na ịnweta otu akụrụngwa a tụkwasịrị obi, nkwado, na ahụmịhe nchekwa nchekwa ga-atọ ha ụtọ ma ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ na akụrụngwa ahụ. A na-etinye Light Iron's remote offline editorial ugbu a na mpaghara New York City, gbasaa mgbasawanye mpaghara na mbido 2021.
Maka DI na imecha ya, Light Iron na-enye ọtụtụ mmekọrịta mmekọrịta (ndụ) yana asynchronous nyocha iji gboo mkpa ndị ahịa. Ihe omume nke Light Iron mechara mechie ya na ihe ndi ozo di n'ime ya gunyere usoro ihe anyi mere na onyunyo, nke ozo, nke ndi Queen's Gambit, The Haunting of Bly Manor, na Social Distance, na ihe ndia Otu Abali Na Miami, Wander Darkly, na Ihe Iwu putara ebe M.
Na mgbakwunye, kemgbe mbubreyo June, Light Iron alọghachila ịnabata ndị ahịa n'onwe ya. Companylọ ọrụ ahụ kwadoro ịnye ahụmịhe dị mma, nke na-agbanwe agbanwe, ma na-arụ ọrụ nke ọma, ma guzobe usoro iwu nchekwa ọhụrụ maka ndị ahịa na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ, gụnyere mmemme nhicha zuru oke, usoro ọrụ nri emelitere, yana oke ibi na ebe obibi kwesịrị ekwesị. Enwere ike ịchọta atumatu na usoro ọhụụ yana ozi ọkwa dị ugbu a maka ebe Iron Iron nọ na Light Iron's COVID-19 resource hub, www.lightiron.com/covid.
N'ịkwado mgbasawanye nke ọrụ ya, Light Iron ejirila ọrụ ndị ọrụ na-adịbeghị anya nke ụlọ ọrụ Seth Hallen, Phil Harrelson, na Laura Borowsky.
Seth Hallen - Onye isi Nchịkwa
Seth Hallen sonyeere Light Iron dị ka onye isi ngalaba na-ahụ maka njikwa, na-eweta oke ọrụ na mmepụta na post na otu, yana ọtụtụ iri afọ nke ahụmịhe ndu na ọtụtụ mmekọrịta ụlọ ọrụ. Na a ndabere dị ka a azụmahịa unit nwe n'ime Sony, Onye ọchụnta ego, na onye isi oche, Hallen na-eje ozi ugbu a dị ka Onye isi ala nke Hollywood Ndị ọkachamara (HPA), ọrụ ọ rụrụ kemgbe 2016.
“Ikiri Ìhè Iron si n’afọ gara aga dị ịtụnanya,” ka Hallen kwuru. “Site na mbido, ụlọ ọrụ ahụ na-echegharị etu esi arụ ọrụ post ma na-eto aha ya maka ọdịnala ndị ahịa lekwasịrị anya. Ihe omuma ohuru ohuru a n’enye ndi ahia otutu mgbanwe karie ichu ochicho nke okike ha. Enwere m mmasị na-atọ ụtọ mgbe niile maka ikike okike na imepụta post, enwere m obi ụtọ iso ndị omenkà Light Iron na-arụ ọrụ, ndị gbasoro iche na ịnabata mgbanwe. ihe nkiri teknụzụ na ịsụ ụzọ ụzọ ọhụrụ iji nye anwansi na ihuenyo. ”
Phil Harrelson - VP nke Ọrụ
Dịka Light Iron's VP of Operations, Phil Harrelson ga-ahụ maka ijikwa arụmọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, na-elekwasị anya na itinye usoro na usoro iji nyere ndị ahịa aka ka mma. Harrelson nwere ihe karịrị afọ 20 'ahụmahụ na post-mmepụta
ụlọ ọrụ gafee VFX, dailies, mmepụta, na ahịa, gụnyere afọ isii na-arụ ọrụ na Ọkachamma. Ọ na - ewetara ya ụdị ọrụ dịgasị iche iche dị iche iche ọ mepụtara dịka onye ahịa - na - arụ ọrụ ihe karịrị afọ iri dịka onye nlekọta post na onye na - emepụta ihe maka usoro na atụmatụ - yana onye na - ere ahịa.
Laura Borowsky - Onye isi Nzụlite Azụmaahịa
Onye isi ohuru nke Development Business Laura Borowsky na ewetara ya ihe omuma di iche iche nke enyere ihe kariri iri na iteghete n’arụ oru na ihe ndi mmadu, ndi mmadu, na ahia iji gbasaa ndi otu Light Iron's Business Development, nke ndi Katie Fellion duziri. Borowsky malitere ọrụ ya na Technicolor, yana site na ọrụ ya ọ mepụtara mmekọrịta siri ike na ndị ahịa ụlọ ọrụ yana ihe okike gụnyere ndị cinematographers na ndị isi, na-eme maka mmekọrịta siri ike na Panavision. Dabere na Los Angeles, Borowsky si n'Atlanta, ọrụ ọhụrụ ya ga-agụnye ilekwasị anya na ịzụlite ahịa ndịda ọwụwa anyanwụ.
“Anyị ejirila oge buru ibu hụ na anyị nwere ndị otu kachasị mma iji kwado mkpa ndị ahịa anyị niile, usoro ọrụ mbanye a na-egosi ọkwa dị mkpa na mbọ a,” ka Cioni kwuru. “Seth, Phil, na Laura wetara nnukwu ahụmahụ nke ụlọ ọrụ. Onye ọ bụla n'ime ha ga-akwalite nghọta okike anyị nwere ike inye ndị ahịa anyị ma tinye anyị n'ọnọdụ kachasị mma iji gaa n'ihu na-achịkwa usoro anyị site na gafere nsogbu nke COVID-19 kpatara. ”
Cioni kwukwara, “N'agbanyeghị nsogbu ndị dị mkpa e gosipụtara na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, anyị nwere nchekwube banyere ọdịnihu nke ụlọ ọrụ anyị na ike anyị pụrụ iche maka ịkwado ndị ahịa anyị. “Ka post na mmepụta na-aga n’ihu, Ọkụ Light Iron na-elekwasị anya ebe ọ nọ, na-enye ndị ahịa anyị ikike ime ihe. Anyị na-emepe emepe mgbe niile ụzọ ọhụrụ nke na-arụ ọrụ iji gboo mkpa ha, ma anyị nọ ebe a mgbe niile iji nyere ha aka ịchọta - ma ọ bụ mepụta - ngwọta kacha mma maka ọrụ ha n'otu n'otu. Site na mmụba a na ọrụ na ndị ọrụ anyị, ndị ahịa anyị nwere ike iji ohere karịa mgbanwe ọ bụla karịa oge ọ bụla ma nwee ọfụma na-enweghị post-mmepụta nke na-eme ka ha hụ ọhụụ ha site na ntinye na ihuenyo, n'agbanyeghị ebe ma ọ bụ otu ha si ahọrọ ịrụ ọrụ . ”
Light Iron, ụlọ ọrụ Panavision, bụ onye a ma ama dị ka onye ndu teknụzụ na onye mmekọ nka na nka na ngwụcha na njedebe na ntinye. Ndị na-eme ihe nkiri, ụlọ nka, ndị okike na ndị teknụzụ na-adabere na nka Light Iron iji nyefee usoro ọrụ dijitalụ na-aga n'ihu, site na dailies na njikwa data ruo na agba ikpeazụ na ọrụ nchekwa ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Site na oghere mgbazinye na-anọghị n'ịntanetị na akụrụngwa n'ofe North America nwere ikike dịpụrụ adịpụ, Light Iron bụ ọkachamara na ịbụ ezigbo mmadụ iji gboo mkpa pụrụ iche nke ihe nkiri eserese na ọrụ episodic.
Previous: Vizrt Group goro Daniel Url iji mee ka ndị ahịa lekwasị anya na Mmepụta Ngwaahịa
Osote: Art Loft Banyere Oge 9th Ya Na South Florida PBS!